'गाँजा खेतिबाट खर्बौको कमाई हुन्छ' - Aarthiknews
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूहरुले धेरै सोच र विचार गरेर नेपालमा गाँजा खेति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्राईभेट विल दर्ता गराएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त विद्येयक सर्वसम्मतीले पारित हुनेपनि उनले विश्वास दिलाएका छन् ।
तामाङले भोलि कसैले नियम तथा कानून उल्लंघन गरे एक वर्षसम्म जेल सजाय र एक लाखसम्म जरिवाना हुनेसमेतको व्यवस्था गर्न लागिएको सुनाए । उनले गाँजामा ४५० भन्दा बढि औषधीय गुण रहेको पनि सुनाए । उनले नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि गाँजा खेति खुल्ला गर्दा उक्त योजना ‘गेम–चेन्जर’ हुनसक्नेपनि तर्क गरे । उनले विद्येयक शतप्रतिशत पारित हुने दाबी दोहोर्याए । तर, नेपालमा यो विद्येयक पारित भएपनि आफूहरुले सेवनकोलागि प्रोत्साहन नगरेको पनि उनको जिकिर थियो ।
उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा गाँजा बेचेरै वार्षिक २४ खर्बको आम्दानी भएको सुनाउँदै नेपालमा पनि गाँजा खेतिको खुल्लाबाट लाभ लिन सकिने प्रचुर सम्भावना सुनाए । उनले भने,‘यो चर्चाको विषयमात्रै होईन, हामीले निकै मेहनत, अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेर यो विषय ल्याएका हौं । यसभन्दा पहिले हामीले विज्ञ समूह, चिकित्सकहरुसँगपनि छलफल तथा परामर्श गरेका थियौं ।
वाग्मती प्रदेशबाट माननीय केशब स्थापितजीलाई यो विषयमा बोल्न लगाएर जनमत बुझेका थियौं । शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरुसँगपनि हामीले यो विषय छड्के रुपमा राखेका थियौं । उहाँहरुले पनि यो राम्रो हो भन्नुएको थियो । केही माननीयहरुले विरोध गर्नु अलग कुरा हो । तर, प्रायः सबै माननीयज्यूहरुले यसमा सहमत जनाउनुभएको छ । यो विद्येयक पारित हुन्छ ।’
त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मिर्गौलाको पूनः प्रत्यारोपण नेपालमा गराएकोमा गर्व महशुस गर्दै अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । तामाङले आफू भोलि जस्तोसुकै ठूलो ओहादामा पुगेपनि उपचारको लागि देशबाहिर नजाने समेत प्रण गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री दिपक खड्काले नेपालमा गाँजा खेति खुल्ला गर्ने विषय संवेदनशील भएको भन्दै यसमा विशेष छलफल र ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले सपना पनि पूरा हुने खालका देखाउनुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘नेपालले डेढ खर्बको धान, कोदो र मकै मुलुक बाहिरबाट किनेर ल्याएको छ । सिंचाई हुने उत्पादित जमिन पनि अहिले बाँझै छ । युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । नेपालबाट ब्रेन र मसल दुवै ड्रेन भएको छ । अब यहाँ, नेपालमा बसेका र जो विदेश जान नसकेकाहरुलाई गाँजा सेवन गराएर डिप्रेसनको सिकार गराउन खोजेको हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
उनले कमाई त गाँजाबाटमात्रै होईन रक्तचन्दनबाट पनि हुन्छ भन्ने कुरा नसुनेको होईन भन्दै गाँजा खेति खुल्ला गर्नुपर्ने विद्येयकको घुमाउरो पारामा विरोध गरे । उनले भने,‘गाँजा खेति त व्यवस्थित् गर्ने कुरा भयो, तर भोलिका दिनमा यसको असर के हुने हो ? हामीले आफ्नो धरातलपनि हेर्नुपर्छ । समृद्धि हाँसिल गर्नतर्फ मात्रै नेहेरौं ।’ उनले सत्ता पक्षका सांसदहरुले विद्येयक दर्ता गराएकोले फेल हुने सम्भावना नरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सत्तापक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको विद्येयक हो, फेल हुने त कुरै छैन् । तर, हामीले यो विषयमा गम्भिर भएर सोचौं ।’
उनले प्रधानमन्त्री मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा आफू नकारात्मक कुरा गर्ने पक्षमा नभएपनि वर्तमान सरकार कुहिएको सिनोमा फसेजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सरकारले समाजमा दङदङी बाँड्यो । सरकारले समृद्धिको कुरा त गरेको छ, तर आफ्नै मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएकोले अब समृद्धिको कल्पना गर्न गाह«ो छ ।’
उनले ठूलो त्याग, तपस्या र संघर्षबाट अहिलेको व्यवस्था प्राप्त भएकोले यसलाई जोगाउनु नै अहिलेको मुख्य काम भएको सुनाउँदै व्यक्ति अर्थात म मात्रै समृद्धि भएर हुँदैन देश नै समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने पनि सुझाव दिए ।
फरक प्रसँगमा उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद नेताहरुले विधान नमान्दा उत्पन्न भएको तर्क गरे । उनले भने,‘पार्टीभित्र विचार र छलफल हुन्छ । यसले नै चीरा पर्यो भनेर धेरैले भनेको पनि सुनियो ।’ उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन गर्दा होस वा केन्द्रिय सदस्यहरु मनोनित गर्दा नै किन नहोस विधान नमानेको भन्ने पनि आरोप पार्टीभित्र लागेको सुनाए ।
खड्काले प्रश्न गर्ने (रामचन्द्र पौडेल पक्ष) र निर्णय गर्ने (शेरबहादुर देउवा) दुवै समूहले विधान विपरित काम गरेको र दुवै समूह यसमा चुकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘विधान सबैले मिचेका छन् । ५ जना नेतालाई चिक्त बुझ्दा विधान मिचेको कुरा नउठ्ने तर ५ जना नेतालाई चित्त नबुझ्दा चाहीँ विधान मिचेको कुरा उठ्ने गरेको छ । यो गलत हो ।’
पार्टीभित्र हुने छलफल तथा बहसले परिस्कृत गर्ने भए राम्रै हुने नत्र नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि उनले पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराए । अहिले देखिएको विवादको विषयमा प्रश्न उठाउनेको पनि कमजोरी रहेको उनको भनाई छ । उनले देउवा र पौडेल दुवै समूह सच्चिन जरुरी रहेको छ ।